May 18, 2021 - ApannPyay Media
မိတ်ဆွေတို့ရေ….မျောက်ငိုသီး စားပြီး ဆရာဝန်ဆီမသွားဘဲ နေကြရအောင်᠌᠌᠌
ခေါင်းလျှော်ရည်ထဲ ဆားထည့်လျှော်တဲ့အခါ ရလာမယ့်ကောင်းကျိုးတွေ–
ခေါင်းလျှော်ရည်ထဲ ဆားထည့်လျှော်တဲ့အခါ ရလာမယ့်ကောင်းကျိုးတွေ– မီးဖိုချောင်မှာ အမြဲတမ်းလိုလိုရှိနေတဲ့ဟင်းချက်စရာတွေအတွက် အသုံးဝင်တဲ့ဆားဟာ မထင်မှတ်ပဲ ဆံပင်အတွက်ပါ အသုံးဝင်တဲ့အလှကုန်ပစ္စည်းဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။ ခေါင်းလျှော်ရည်ထဲကို ဆားအနည်းငယ်ထည့်လျှော်ပေးသင့်တယ်ဆိုတဲ့ အလှအပဆောင်းပါးတစ်ခုကိုတွေ့ခဲ့လို့ ပရိသတ်ကြီးအတွက် အလှအပဗဟုသုတအနေနဲ့ ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ ခေါင်းလျှော်ရည်ထဲဘာလို့ဆားထည့်ပေးသင့်တာလဲ? ဆားက သဘာဝဖြစ်တဲ့အတွက်ဘေးဥပါဒ်ဖြစ်မှာလည်းလုံးဝမစိုးရိမ်ရပါဘူး။ခေါင်းလျှော်ရည်ထဲကို ဆားစားပွဲတင်ဇွန်း ၂ဇွန်းစာလောက်ရောထည့်ပြီးလျှော်ပေးတာက… အဆီပြန်ခြင်းကိုကာကွယ်ပေးတယ် ခေါင်းလျှော်ရည်ထဲဆားထည့်လျှော်ပေးတာက ဦးရေပြားအဆီပြန်ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးပါတယ်။လုံးဝအဆီမပြန်တာမျိုးမဟုတ်ပဲ လိုအပ်တဲ့အဆီပမာဏာပဲအဆီပြန်အောင်ထိန်းညှိပေးတာပါ။ အဆီပြန်တာကိုကာကွယ်ပေးတဲ့အတွက် ၂ရက်လောက်နဲ့အဆီပြန်တဲ့ဦးရေပြားဟာ စေးကပ်ကပ်ဖြစ်မနေတော့ပဲ သုံးရက်လောက်နေမှ ခေါင်းလျှော်ပေးလို့ရသွားပါတယ်။တစ်ပတ်လောက်နဲ့တင် သိသာတဲ့ရလဒ်ကိုမြင်တွေ့ရမှာပါ။ ဗောက်ထခြင်းနဲ့ဦးရေပြားပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးတယ် ခေါင်းလျှော်ရည်ထဲဆားအနည်းငယ်ထည့်လျှော်ပေးတာဟာ ဗောက်ထခြင်းကိုကာကွယ်ပေးပါသတဲ့။ဗောက်ထလို့စိတ်ညစ်စရာမလိုတော့ပါဘူးနော်။ပိုပြီးထိရောက်ချင်ရင် အိမ်သုံးဆားထက်ပင်လယ်ဆားကိုသုံးပေးပါ။ ပင်လယ်ဆားနဲ့ခေါင်းလျှော်ရည်ကို ရောစပ်ပြီးဦးရေပြားကိုအသာအယာ ၁၀ မိနစ်လောက်နှိပ်နယ်ပေးပါ။ဦးရေပြားကိုပါသန့်စင်ပြီးသားဖြစ်ပါလိ့မ်မယ်။ ဆံပင်ကျွတ်သက်သာစေတယ် ဆံပင်တွေခဏခဏကျွတ်နေရင် ဒီနည်းလေးကိုသာသုံးပေးလိုက်ပါ။အပေါ်ကနည်းအတိုင်း ဦးခေါင်းကို၁၀မိနစ်လောက်နှိပ်နယ်ပေးပြီးလျှော်ကြည့်ပါ။အရင်လိုဆံပင်မကျွတ်တော့တာကို သတိထားမိပါလိမ့်မယ်။ ဒီတော့ဘယ်လိုဆားမျိုးက ဘာအတွက်အသုံးဝင်လဲ? စားပြဲတင္ဆား အိမ်သုံးဆားက ဆံပင်ကျွတ်ခြင်းကိုအထူးသက်သာစေတယ် သဘာ၀ဆား မသန့်စင်ရသေးပဲ သဘာဝအတိုင်းရရှိလာတဲ့ဆားက ဦးရေပြားပြဿနာတွေကိုကာကွယ်ပေးတယ်။ဆံပင်အတွက်လိုအပ်တဲ့ဓာတ်တွေဖြည့်ပေးတယ်။ ဆားခါး ဆားခါးကတော့စိမ်နိုင်ရင် … Read more
၂ လအတွင်း ၁၄ ပေါင်ကျတဲ့ IF Diet နည်း
၂ လအတွင်း ၁၄ ပေါင်ကျတဲ့ IF Diet နည်း ခရီးတွေသွား စားလိုက်သောက်လိုက်နဲ့ ဖြည်းဖြည်းချင်း ဝလာတာကနေ ပေါင် ၁၆၀ လောက်ဖြစ်လာတော့ တအားစိတ်ညစ်လာတာ အဲ့လိုနဲ့ ကိုဗစ်ကြောင့် Stay Home ရမယ့်အချိန် ရောက်လာတော့ ဒါဆို အိမ်တွင်းအောင်းပြီး ဝိတ်ချမယ်ဆိုတဲ့အကြံနဲ့ စာတွေရှာဖတ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော် အဲ့မှာ တော်တော်များများနဲ့ အဆင်ပြေတဲ့ Intermittent Fasting ဆိုတဲ့ Diet Plan ကို သွားတွေ့တယ် ဝိတ်ချတာ2လအတွင်း 14 ပေါင်ကျသွားတယ် လုပ်ရတာလည်း လွယ်လွယ်လေးရယ်… ကျန်းမာရေးလည်း မထိခိုက်ဘူး… ဆက်ပြောပြမယ် အဆုံးထိဖတ်ကြည့်နော် IF Diet ဆိုတာ – အရှင်းဆုံးပြောရရင် တစ်ရက်မှာ 16 နာရီ မစားပဲနေ … Read more
မျက်စိကို အကျိုးပြုစေတဲ့ ရုံးပတေသီးတွေက တခြားဘယ်လိုမျိုး ကောင်းကျိုးတွေကိုလည်း ပေးစွမ်းနိုင်သေးလဲဆိုတာကို ဗဟုသုတအနေနဲ့ ပြောပြပေးချင်ပါတယ်
မျက်စိကို အကျိုးပြုစေတဲ့ ရုံးပတေသီးတွေက တခြားဘယ်လိုမျိုး ကောင်းကျိုးတွေကိုလည်း ပေးစွမ်းနိုင်သေးလဲဆိုတာကို ဗဟုသုတအနေနဲ့ ပြောပြပေးချင်ပါတယ် အသားကိုလှီးလိုက်ရင် အတန်ငယ်ချွဲပျစ်ပျစ်ရှိတဲ့ ရုံးပတေသီးတွေဟာ အချိန်အခါမရွေး ဈေးတွေထဲမှာ အမြဲရှာဝယ်လို့ရပါတယ်။ ပိန်ပိန်ရှည်ရှည်လေးနဲ့ စားလို့အင်မတန်ကောင်းတဲ့ ရုံးပတေသီးတွေဟာဆိုရင် မျက်စိအားကို အင်မတန်ကောင်းစေတယ်လို့ လူကြီးတွေပြောစကားကို ငယ်စဉ်ကတည်းက ကြားဖူးကြမှာပါ။ ဒီလိုကိုယ့်ရဲ့မျက်စိကို အကျိုးပြုစေတဲ့ ရုံးပတေသီးတွေက တခြားဘယ်လိုမျိုး ကောင်းကျိုးတွေကိုလည်း ပေးစွမ်းနိုင်သေးလဲဆိုတာကို ဗဟုသုတအနေနဲ့ ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ ကျောက်ကပ် ၂၀၀၅ ခုနှစ်က Jilin Medical ဂျာနယ်က ရုံးပတေသီးကို သုတေသနလုပ်ထားတဲ့ စာတမ်းတစ်ခုကို ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီသုတေသနမှာ ကျောက်ကပ်ရောဂါဖြစ်ပွားနေတဲ့သူတွေကို အဖွဲ့ ၂ ဖွဲ့ခွဲထားပြီး တစ်ဖွဲ့ကို ရုံပတေသီးမှာပါတဲ့ ဓာတ်တွေနဲ့ ကုသခဲ့ပြီး ကျန်အဖွဲ့ကိုတော့ သာမန် ကျောက်ကပ်ကုသနည်းအတိုင်း ၆ လ ကုသခဲ့ပါတယ်။ … Read more
ရင်သားကင်ဆာဖြစ်ပွားခြင်းမှ ကြိုတင်ကာကွယ်ပေးမည့်အစားအစာများ ယနေ့ကမ္ဘာပေါ်တွင် အမျိုးသမီး ၈ ယောက်မှာ ၁ ယောက်နှုန်းနှင့် ခံစားနေရသည့်နေရာဂါမှာ ရင်သားကင်ဆာရောဂါပဲဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးသမီးများသာမက အမျိုးသားများလည်း ရင်သာကင်ဆာရောဂါ ဖြစ်ပွားနိုင်ချေ ၁ ရာခိုင်နှုန်းခန့် ရှိပါတယ်။ ဒီအန်အေ ပျက်စီးသွားခြင်း၊ မျိုးရိုးဗီဇ ကူးပြောင်းသွားခြင်းက ရင်သားကင်ဆာရောဂါကို ဖြစ်ပွားစေတဲ့ အရင်းအမြစ်များဖြစ်ပါတယ်။ မိမိရဲ့နေထိုင်စားသောက်မှုပုံစံကလည်း အရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာ ပါဝင်ပါတယ်။ အရက်အလွန်အကျွံ သောက်သုံးခြင်း၊ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း၊ ကျန်းမာရေးနဲ့ မညီညွှတ်သော အစား အစာများ စားသုံးခြင်းတို့ကလည်းရင်သားကင်ဆာဖြစ်ပွားနှုန်းနဲ့ ဆက်နွယ်မှုရှိတယ်လို့ သုတေသနလေ့လာချက်များအရ သိရှိရပါတယ်။ ဒါဆိုရင် ရင်သားကင်ဆာဖြစ်ပွားနိုင်ချေကို လျော့ချဖို့အတွက် ဘယ်လိုအစားအစာတွေကို စားသုံးသင့်သလဲ။ အစိမ်းရင့်ရောင် ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ ကိုက်လန်၊ ဟင်းနုနွယ်၊ မုန်ညှင်းစတဲ့ အစိမ်းရောင်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များမှာ ကင်ဆာရောဂါကို တိုက်ဖျက်ပေးနိုင်တဲ့ အစွမ်းသတ္တိများ ပါဝင်ပါတယ်။ ထိုဟင်းရွက်များက Carotenoid … Read more
မဟာမြိုင်တောမှရသေ့ ကြီးကောဝိဒ ညွှန်ပြသော ဆီးချိုသွေးချိုအတွက်ဆေးနည်း
မဟာမြိုင်တောမှရသေ့ ကြီးကောဝိဒ ညွှန်ပြသော ဆီးချိုသွေးချိုအတွက်ဆေးနည်း ဆီးချိုသွေးချိုနှင့် (ဆန်ဆေးဆင်) မဟာမြိုင်တောမှရသေ့ ကြီးကောဝိဒ ညွှန်ပြသောနည်းဖြစ်သည် ဆန်ဆေးရေ ၅ဝသားပုလင်း၃ပုလင်း ဆေးခါးကြီးရွက် ၃ကျပ်သား ဆင်တုံးမနွယ် ၃ဝသား(အနွယ်) ဆားအနည်းငယ် ဆန်နို့ဆီဗူး၃ဗူးမှရရှိသော ဆန်ဆေးရည်ဖြစ်သည် ဟုဆိုသည်။ ထို၃မျိုးကို ၂ရက်တိတိစိမ်၍သောက်ခြင်းဖြစ်သည်။ စိတ်ပျက်ဖွယ်ခါးလှသည်။ ဝေဒနာရှင်တို့ အံကြိတ် သောက်ရသောဆေးဖြစ်ပြီး ပျောက်ကင်းသူများလှသည်။ နေစဉ် လက်ဖက်ကြမ်း၁ခွက်သောက်ရမည်ဆိုပါသည်။ လျာမှအခါးအတွက်ပျားရည်အနည်းငယ်လျက်ရုံမျှသာ။ သကှားလုံးဝမစားရပါ။ စိတ်ပျက်ဖွယ်ခါးလှပါသည်။ ဆေးခါးကြီး၁ရွက်သည် အခါးတွင် စိတ်ပျက်ဖွယ်ဖြစ်ကြောင်း လက်တွေ့စမ်းဖူးပါသည်။ ထိုဆေးရည်ဆေးတစ်ဖုံကုန်လျှင် ဆီချိုသွေးချိုစစ်ဆေးကြပါကုန်။ ဆီးချိုသွေးချိုကျသွားပါလျှင် တစ်ပတ်နှစ်ကြိမ်သာသောက်သွားရန်။ အစားအသောက်ဆင်ခြင်ကြပါကုန်။ ရဲမျိုးသူ ဗောဓိမြိုင် မဟာၿမိဳင္ေတာမွရေသ့ ႀကီးေကာဝိဒ ညႊန္ျပေသာ ဆီးခ်ိဳေသြးခ်ိဳအတြက္ေဆးနည္း ဆီးခ်ိဳေသြးခ်ိဳႏွင့္ (ဆန္ေဆးဆင္) မဟာၿမိဳင္ေတာမွရေသ့ ႀကီးေကာဝိဒ ညႊန္ျပေသာနည္းျဖစ္သည္ ဆန္ေဆးေရ ၅၀သားပုလင္း၃ပုလင္း ေဆးခါးႀကီးရြက္ ၃က်ပ္သား … Read more
ကြည်လင်ရှင်းသန့်တဲ့ မျက်နှာကို ပိုင်ဆိုင်ဖို့ရှားစောင်းလတ်ပတ်နဲ့ ပေါင်းတင်နည်း ရှားစောင်းလတ်ပတ်က ပျိုမေတို့အတွက် အလှအပ အဖော်မွန်ကောင်းပါပဲ။ ရှားစောင်းလတ်ပတ်ကို ဖျော်ရည် ဖျော်သောက်နိုင်သလို မျက်နှာ၊ ဆံကေသာ၊ အသားအရေ အတွက်ပါ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ရှားစောင်းလတ်ပတ်ရဲ့ အဓိက တာဝန်ကတော့ အသားအရေအတွက် လိုအပ်တဲ့ အစိုဓာတ်ကို ဖြည့်ပေးတာပါ။ ရှားစောင်းလတ်ပတ် သုံးပြီး နောက်နေ့မှာပဲ အသားအရေ ပိုကောင်းလာတာကို သုံးဖူးသူ ပျိုမေတိုင်း ကြုံဖူးမှာပါ။ ဒီတော့ ရှားစောင်းလတ်ပတ်နဲ့ ပေါင်းတင်နည်းလမ်းကို ကြည့်လိုက်ရအောင်နော်- ဒီနည်းလမ်းအတွက် လိုအပ်တဲ့ ပစ္စည်းတွေကတော့- ၁။ ရှားစောင်းလတ်ပတ်ဂျယ် သုံးဇွန်း ရှားစောင်းလတ်ပတ်က အေးမြခြင်း အာနိသင်ကို ပေးစွမ်းနိုင်ပြီး အယောင်အယမ်း ကျစေပါတယ်။ Collagen ထုတ်လုပ်မှုကို ပံ့ပိုးပေးပါတယ်။ အမာရွတ်တွေကို သက်သာစေပြီး အသားအရေ ချောမွေ့စေပါတယ်။ ဗာဒံစေ့ … Read more
ရဲယိုရွက် ၉ ရွက် နှင့် ဥသျှစ်သီး ၂ လုံး ရဲ့အစွမ်း ရဲယိုရွက်‌၏အစွမ်‌း ဒူးနာ‌ဝေဒနာ‌ကြောင်‌့ ရက်‌ရှည်‌လများ လမ်‌းမ‌လျှောက်‌နိုင်‌တဲ့အဖွားတစ်‌‌ယောက်‌ ခု‌တော့ တိုးတတ်‌‌ကောင်‌းမွန်‌ ‌လျှောက်‌လှမ်းနိုင်‌ခဲ့ပါပြီး တနသာင်္ရီမြို့နယ်‌ တိုင်‌းရင်‌း‌ဆေးဆရာကိုစိုးမင်‌းထက်‌ရဲ့ ညွုန်‌ကြားမှုနဲ့အတူ ရဲယိုရွက်‌ကို နာကျင်‌‌နေတဲ့ဒူးတဝိုက်‌ စဉ်‌အုံ‌ပေးခဲ့ခြင်‌းဖြင်‌့သက်‌သာ ‌ကောင်‌းမွန်‌လာခဲ့ပါပြီး ဒူး‌ဝေဒနာ ခံစား‌နေရတဲ့ ဦးဦး ‌ဒေါ်‌ဒေါ်များအတွက်‌ တင်‌ဆက်‌လိုက်‌ပါတယ်‌ခင်‌ဗျာ့ ‌ရောဂါဘယ ကင်‌း‌ဝေးကြပါ‌စေ ဆီးချိုဖြစ်တာနှစ်၂၀ ရှိပြီ သူအမေ ပျောက်တဲ့အတွက်ဆေးနည်းဒါနပြုတာပါ။ ဤဆေးနည်းကိုဖြန့်ဝေပါတယ်လိုအပ်သော ပစ္စည်းမှာရဲယိုရွက် နှင့် ဥသျှစ်သီးပါ ပြုလုပ်ပုံ ရဲယိုရွက် ၉ ရွက် နှင့် ဥသျှစ်သီး ၂ လုံးကိုရေနှင့်ပွက်ပွက်ဆူအောင် ကျ ို ပါ ။ ရေသန့်ပုလင်း (၆-၁၀) နှင့်ထည့်ကျိ ုပါ။ … Read more
ဒူးရင်းသီးနှင့် တွဲဖက်စားသုံးခြင်းမပြုလုပ်သင့်သော အစားအစာများ ၁) အရက်၊ဘီယာ ဒူးရင်းသီးစားရင်းနဲ့ အရက်သောက်ခြင်းက သေစေနိုင်လောက်တဲ့အထိ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒူးရင်းသီးမှာပါဝင်တဲ့ ဓာတ်တစ်မျိုးက ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ ရှိတဲ့ အရက်ပမာဏထိန်းချုပ်တာကို ကူညီပေးတဲ့ဆဲလ်တွေကို ဟန့်တားစေပါတယ်။ အဲ့ဒီအချက်ကလေးကတော့ သေစေနိုင်တဲ့အထိ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ၂) ႏို႔ ဒူးရင်းသီးက သွေးထဲမှာရှိတဲ့ ကဖင်းဓာတ်ကို လျော့နည်းစေပါတယ်။ ကဖင်းဓာတ်ဆိုတာ လူကို လန်းဆန်းစေတဲ့ ဓာတ်တစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒူးရင်းသီးအများကြီးစားတဲ့အခါ အိပ်ချင်ခြင်း၊ခေါင်းလေးခြင်းတို့ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုဖြစ်ခြင်းဟာ ကဖင်းဓာတ်လျော့နည်းသွားခြင်းကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒူးရင်းသီးကို နို့နဲ့ အတူတွဲစားသုံးမိရင် ကဖင်းဓာတ်ကို ပိုလျော့စေပြီး သွေးတိုးတာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အခန့်မသင့်ရင် သေတဲ့အထိ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ၃) ကိုကာကိုလာ ကဖင်းဓာတ်အများကြီးပါဝင်တဲ့ ကိုလာကိုလာနဲ့ ဒူးရင်းသီးကို တွဲစားတဲ့အခါ ရုတ်တရက် နှလုံးရပ်ခြင်း၊ အသက်ရှုကြပ်ခြင်း၊စတာတွေပါ ဖြစ်စေပါတယ်။ ၄) ခရမ်းသီး … Read more